यूट्यूब च्यानल मूल्यांकन - YTpals
एक YouTube विशेषज्ञको सहयोग चाहिन्छ?
यहाँ हाम्रो YouTube मूल्यांकन सेवाको छोटो उदाहरण छ ...
एक YouTube विज्ञले आफैंको भिडियो च्यानललाई तपाईंको YouTube च्यानललाई गहन रूपमा, giving 45++ तपाईंको YouTube च्यानल र भिडियोहरूको मिनेट मूल्या giving्कन दिदै आफ्नो भिडियोहरू रेकर्ड गर्दछ + तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई विश्लेषण गर्दछ + तपाईंको अर्को चरणहरूका लागि 5-चरण कार्य योजना।
अब खरीद्नुहोस् • $ १२०
तपाईंको + 45+ मिनेट भिडियो समावेश:
यूट्यूब च्यानल मूल्यांकन को खरीद गर्नु पर्छ?
के तपाईं एक सानो YouTuber आफ्नो च्यानल बढाउन संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाइँ अधिक विचारहरू प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ तर के गर्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न?
के तपाईंसँग प्लेटफर्मको बारेमा प्रश्नहरू छन् तर कसैलाई थाहा छैन तपाईंले सोध्न सक्नुहुन्छ?
यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए हाम्रो YouTube च्यानल मूल्यांकन सेवा तपाईंको लागि हो।
हाम्रो विज्ञहरू आफैं YouTubers हो, जसको लाखौं YouTube दृश्यहरू छन्, १ लाख सदस्यहरूको नजिक र धेरै वर्षदेखि भिडियोहरू सिर्जना गर्दैछ।
हाम्रो विशेषज्ञहरु YouTube लाई भित्री-बाहिर जान्छन् र तिनिहरुसँग आफ्नो ज्ञान साझा गर्नेछन् किनकी उनीहरू भिडियो मा तपाइँको यूट्यूब च्यानलको पूर्ण समीक्षा गर्छन्।
मैले यो सेवा खरीद गरेपछि तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ?
हामी तपाईंको of 45+ मिनेटको भिडियो हामी तपाईंको YouTube च्यानलमा राम्ररी हिंड्ने र मूल्यांकन गर्ने बनाउँदछौं। त्यसो भए, हामी यसलाई यूट्यूबमा अपलोड गर्नेछौं, भिडियो निजी बनाउनेछौं (केवल तपाईंको लागि) र तपाईंलाई त्यसमा लिंक पठाउनेछौं ताकि जब तपाईंसँग खाली समय हुन्छ तपाई मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाईंले तपाईंको अर्डर गरेपछि, तपाईंको च्यानल मूल्या typically्कन पूरा गर्न यसले हामीलाई सामान्यतया 3-7दिनहरू लिन सक्दछ।
के मेरो च्यानल मूल्यांकनमा विशेष रूपमा समावेश गरिएको छ?
१) हामी तपाईंको भिडियोहरू जाँच गर्नेछौं र तपाईंलाई रचनात्मक आलोचना दिन्छौं।
२) सुझावहरू कसरी तपाइँ आफ्नो भिडियोहरू अझ राम्ररी हेराई समय र श्रोताको धारणा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
)) हामी तपाईंको शीर्षक र थम्बनेल, सामग्री रणनीति, कुञ्जी शब्द र वर्णन, गृहपृष्ठ आदि समीक्षा गर्नेछौं।
)) हामी तपाइँको भिडियोहरू कसरी प्रमोट गर्ने र सब्सक्राइबरहरू प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो रहस्यहरू साझेदारी गर्ने छौं।
)) हामी तपाईका प्रतिस्पर्धीहरुको विश्लेषण गर्छौं र हामी भन्छौं कि कसरी उहाँहरुबाट कसरी राम्रो हुन सकिन्छ।
))--चरण कार्य योजना!
के तपाईंलाई मेरो यूट्यूब च्यानल लगईन प्रमाण पत्र आवश्यक छ?
होइन, हामीलाई तपाईंको लग इन प्रमाणहरू आवश्यक छैन। हामी तपाईंको YouTube च्यानलमा लग इन गर्दैनौं।
हामी तपाईंलाई 45 XNUMX+ मिनेटको भिडियो प्रदान गर्नेछौं तपाईंको च्यानललाई राम्ररी मूल्याating्कन गर्नका लागि र हामी तपाईंको सुविधामा सुझावहरू / परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं।
के तपाईं कुनै पनि YouTube च्यानल विधाका साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ गैर-अ English्ग्रेजी च्यानलहरूमा एक च्यानल मूल्यांकन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हो! हामी भिडियोमा तपाईंको च्यानल समीक्षा गर्नेछौं र अंग्रेजी बोल्छौं, तर हामी तपाईंको मनपर्ने भाषामा अनुवादित उपशीर्षकहरू प्रदान गर्नेछौं।
उपशीर्षकहरू पढ्दा, यसले तपाईंलाई भिडियोको साथमा हेर्नको लागि अनुमति दिनेछ, तपाईंले भन्नुभएको सबै कुरा बुझ्नुभयो भनेर निश्चित गर्न।
हामीले प्रयोग गर्ने अनुवाद सफ्टवेयर उत्कृष्ट छ र तपाईंको मनपर्ने भाषामा अनुवाद गर्ने राम्रो कार्य गर्दछ। हामी तपाईको मूल्या in्कनमा के भनिरहेछौ भनेर तपाईले पूर्णरूपले बुझ्नुहुनेछ।